Kanaalka Ekrem İmamoğlu wuxuu leeyahay Istanbul waa mashruuc kiro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulEkrem İmamoğlu Said Channel İstanbul waa mashruuc kiro
ekrem imamoglu wuxuu sheegay in channel istanbul uu yahay mashruuc kiro
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, "Dowladaha Hoose iyo Shirkii Dalxiiska,, Madaxweynaha IMM madaxweynaha Ekrem İmamoğlu wuxuu wajahayaa kaamirooyinka wax soo saarka ugu sarreeya, mashruuc kiro ah" sida ay ku qeexeen Channelstanbul Channel Istanbul yük ayaa la raray. "Khaa'innimadu kuma filna, khiyaanayntu waxay isku dayeysaa inay noqoto katmerlisi" ayuu yidhi Kılıçdaroğlu, "Sidee? 'Waxaan ka furi doonnaa kanaal Istanbul ilaa Badda Madoow, waxaan sameyn doonaa Channel Istanbul.' Marka loo eego maxaa? Injineerka, cilmiga deegaanka wuxuu dhahaa 'Maya', qof walbaa wuxuu dhahaa 'Maya', laakiin hal qof ayaa dhaha, 'Waan sameyn doonaa. Waxaan la kulmi doonaa Badda Madoow ee Marmara 'ayuu yidhi. Waa maxay sababtu, maxay sababtu tahay, waa maxay caqli ahaan, maxay macquul tahay, waa maxay lacag, iyo sidee? Wuxuu yidhi. Ma awoodid, walaal .. Suxufiyiinta, ayaa wax laga weydiiyay wax soo saarka kanaalka Istanbul Imamoglu'na. Imamoglu wuxuu yidhi, "Waxaan ahaa duqa 5 sano waxaan 10 kiiloomitir u jiraa galbeedka Canal Istanbul. Waxaa jira geedi socod noocaas ah. Miyaad fiirin kartaa dooda hadda? Maxaad uga soo horjeeddaa? Maxaad difaaci doontaa? Ugu yaraan waxaan raadinay waxyaabo aan ka soo horjeedno. Waan ognahay warbixinnada magaalooyinka waaweyn. Waan ognahay sida xun xun. Qof baa ii sheegaya wanaaggaaga, dartiis Ilaah '.
Gudoomiyaha Xisbiga Jamhuuriga (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Gudoomiyaha Degmooyinka CHP Canan Kaftancıo andlu iyo Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Duqa Ekrem Imamoglu "Maslak" hoteel lagu qabtay "Dowladaha Hoose iyo Shirka Dalxiiska" ayaa ka qeybgalay. Khudbaddii ugu horreysay ee shir-madaxeedka waxaa duqa magaalada Sarıyer Şükrü Genç ka dhigay “martida”. Kadib gudoomiye ku xigeenka da’da yar ee CHP Seyit Torun iyo ku xigeenka CHP Antalya Çetin Osman Budak ayaa khudbad ka jeediyay. Kılıçdaroğlu khudbad furitaanka shirwaynaha ah, Turkey dalxiisayaal sheegaya in yimaadaan si ay meelaha degmooyinka CHP 90 boqolkiiba, "oo waa in la siiyo taageero kasta oo u dawladaha hoose ee awood siyaasadeed, booqashada 'Waxaan la yaabanahay Sidee jaray taageero this? iyagu baadi goobaya. Waligeen kama caban doonno. Waxaan sii wadi doonnaa inaan u adeegno dalkan anagoo ka adkaanay wixii carqalad ah. Waxa jira badhasaabyo aan cabasho laakiin xallin dhibaatada ”.
KILIÇDAROĞLU: Dİ MIYAAN AHAN KALISKU UU KU SAABSANYAHAY ISTANBUL?
Kılıçdaroğlu wuxuu sheegay in bilicda magaaladu ay u jihaysan tahay nafta bini aadamka, wuxuuna yiri, İstanbul Tusaalaha ugu caansan ee kani waa Istanbul. Haddii fahan siyaasadeed oo xukumay Istanbul sanado badan, hadana dib u noqdo oo dhaho, 'Waan khiyaaneeynay waana sii wadaynaa khayaanada Istanbul', waa inaan dhamaanteen ka fikirnaa. Istanbul Ma this kaliya gacangeliyey, ama khiyaanay of adag taariikhda iyo dhaqanka dalka Turkiga ee? Ka fikir Sultanahmet, Hagia Sophia iyo kaymaha la taaban karo ee ka dambeeya. Waxaan si fiican u fahamsanahay sida ay u qiimo badan tahay fikirka dhismayaasha suuxinta magaalooyinka marka aan aragno sawirka. Kılıçdaroğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo taariikhda, aqoonsiga iyo dhaqanka Istanbul, isagoo ballantii u qaaday Channel Istanbul wuxuuna yiri:
KILIÇDAROĞLU: İZ WAA INAAD geli doontid doorashada koowaad ”
"Khaa'inimadu kuma filna, khiyaanayntuna waxay isku dayeysaa inay noqoto mid khamaara. Sidee? 'Waxaan ka furi doonnaa kanaal Istanbul ilaa Badda Madoow, waxaan sameyn doonaa Channel Istanbul.' Marka loo eego maxaa? Injineer, aqoonyahan deegaanka ayaa leh 'Maya', qof walbaa wuxuu dhahaa 'Maya', laakiin hal qof ayaa dhahaya 'Waan sameyn doonaa. Waxaan la kulmi doonaa Badda Madoow 'Marmara'. Waxa uu sheegay. Waa maxay sababtu, maxay sababtu tahay, waa maxay caqli ahaan, maxay macquul tahay, waa maxay lacag, iyo sidee? Wuxuu yidhi. Ma awoodo, walaal. Horta ma sameyn kartid, waad durba socotaa, waxaad horeyba u socotaa doorashada koowaad. Qofna iskuma dayo inuu lacag lacag ku sameeyo halkan, qofna iskuma dayo inuu lacag sameeyo. Xitaa qalin lacagta ah lama siin doono. Oo miyaanay ku qancin khiyaano? Taariikh, dhaqan, ma loo tixgelin karaa kiro ahaan? Taariikh miyaa lagu burburin karaa indhaha kirada dhaqanka? Taariikh miyaa loo rogi karaa kayn dhaqan la taaban karo? Xitaa ma aadan ka tagin geed, xitaa ma labajibbaar oo taariikh, dhaqan ay jirtay? ”
MADAXWEYNAHA IYO WADAJIRKA XUKUUMADA KU SAMEEYA PANEL
Kılıçdaroğlu'nun ka dibna qaybta guddiga shirka shirku waa la gudbay. Wasiirkii hore ee Dalxiiska Bahattin in Yücel Haguhu, "Horumarinta Magaalooyinka iyo Dalxiiska" ee guddiga, oo ay la socdaan Duqa İmamoğlu Eskişehir Yılmaz Büyükerşen, Duqa Muğla Osman Gurun, dhug yeesha hoteelada Federation Turkey Madaxweyne Osman oo ka tirsan guddida TÜRSAB Nalan Yesilyurt biiray . Kaqeybgalayaashu waxay la wadaageen aqoontooda, fikradahooda, dhibaatooyinka iyo talooyinka xalka ah ee ku saabsan magaalooyinka iyo ururada ay maamulaan ka qeybgalayaasha. Imamoglu, oo horaanba uga tagay guddiga sababta oo ah waqtigiisa mashquul, wuxuu hor yaalay kaamirooyinka hoteelka lagu qabtay shirku.
IMAMOGLU: İ Waxaan eegi doonnaa Warbixinta 'DSI Report'
Imamoglu wuxuu yidhi, sizin Ka sokow warbixinta EIA ee Kanal Istanbul, waxa ku jira warbixintii aad soo gudbisay iyo sheegashada in warbixin ay diyaarisay DSI markii Kanal Istanbul markii ugu horreysay ay ajandaha ahayd qarsoon oo aan lagu darin warbixinta EIA. Ma haysaa wax macluumaad ah oo ku saabsan warbixintan? İmamoğlu ayaa uga jawaabay su'aashan:
Im Horaan u sheegay saxaafadda in DSI ay durba warbixin xun ka bixisay shirkii ugu dambeeyay. Xitaa anigoo ah IBB, waxaan idhi Kanal Istanbul waa mashruuc gabi ahaanba farsamo ahaan khaldan DSI waa hay'ad kale oo dhahda mashruucan khaldan waa khalad Waxaan sidoo kale uga mahadceliyay DSI hirgelinta siyaasad farsamo oo runtii joogto ah. Waxaan helay macluumaad ku saabsan faahfaahinta faylka la soo saaray. In faylka noocan oo kale ah la dhigo miiska halkaas, ku dhawaad ​​mid ka mid ah saddexda Istanbulites ayaa si faahfaahsan uga hadlay halista fuuqbaxa. Laakiin waxaan ka shaqeyneynaa inaan helno warbixin buuxda oo aan dib u eegis ku sameyno. Waxaan sidoo kale kaala socodsiin doonnaa tan, laakiin dhamaadka maalinta waxaan eegeynaa: Waxaa jira mashruuc ama ma jiro; Ma hubo. Sababtoo ah, markaad fiiriso, waxa kaliya ee lagu yaqaan mashruuca Kanal Istanbul, oo loo soo bandhigo laguna adeegto Istanbul, waa kuleyliyaha ama xamuul lagu muujiyey shaqada 3D ee ku taal jidka dhexe ee mareenka. Anyway. Sayidow, waa maxay? 'Kanaalkan ayaa ka shaqeyn doona Istanbul'. Maxay samayn doontaa? Booyadaha iyo kuwa khatarta ku leh Bosphorus ma gudbi doonaan '. Waxaa jira nidaam gebi ahaanba lagu fuliyo dooddan, laakiin markii telefishanka lagu soo bandhigo, 'U fiirso mashruuc qurux badan,' waxaad aragtaa markaad gacanta muujineyso? Waxaa jira 3, 40, 50 dabaq oo ah dabaqyo dhaadheer. Halkee? Bidix iyo midig ee kanaalka. Bal eeg booyadaha khatarta ah kama gudbaan halkaas, ha iska gudbaan halkaan 'halka aad tiraahdid, taasoo sidoo kale ku jirta warbixinnada sheegaya in tirada dadka ku nool 60 milyan 1 kun ay dhowaan degi doonaan magaalo. Markaa waa runtii dadbadan oo magaaladan ah mar labaad. Mar labaad magaaladan waxaa loo yaqaannaa 200 milyan 1 kun oo waxay heshaa 200 milyan, oo soo saarta nooc aad u xun oo magaalooyin ah. Ama mashruuc kiro oo Turki ah oo maalinta ah. ”
IMAMOGLU: “ISTANBUL WAA QATAR”
Haddaba waa maxay tabardarradoodu? Biyaha magaalada Istanbul ayaa qatar ku jira. Badda Istanbul ayaa qatar ku jirta. Badda quruxda badan ee Marmara, oo ah nooca kaliya ee badda gudaha adduunka ku jira, ayaa qatar ku jira. Noocyada nool ayaa qatar ku jira. Juqraafigaas quruxda badan ee Istanbul, 135 boqolkiiba aagagga beeraha ee magaalada, oo u dhaw 15 milyan mitir laba jibaaran, ayaa baabba'aysa. Kama hadlayno iyaga. Waxaan isku dayeynaa inaan u furno wadahadal. Sababta oo ah tan iyo sanadkii 2011, saxaafaddu waa ay halkan joogtay, iyadoo saaxiibbada lagala hadlay telefishanka; Waxaan ku weydiinayaa: Sarkaal dowladeed ayaa soo baxay oo mid mid u sheegay mid ka mid ah kanaal Istanbul. Cabbirka, qaabka, dhismayaasha, kaabayaasha farsamada ... 'Saynisyahanadan ayaa leh saxiix hoos yimaada!' Haddii uu jiro dukumiinti, waan xasilloonaan doonaa haddii qof muujiyo; Ma aqaan. Ma aanan arag ama maqal bay'ad dhagaysan doonta tafaasiisha farsamo ee mashruucan, oo aan ku daba jiray mid ilaa hal sano 8 sano. Maan arag ama maqal kulan furan. Waxaa lagu casuumay qaybaha gobolka ee ku habboon, 'Halkan waxaa ku yaal mashruuc Channel Istanbul ah. Aynu fikirkaaga helno 'Maan arag, mana aanan maqal. Waxaan ahaa duqa 5 sano, isla markaaba. Waxaa jira geedi socod noocaas ah. Miyaad fiirin kartaa dooda hadda? Maxaad uga soo horjeeddaa? Maxaad difaaci doontaa? Ugu yaraan waxaan raadinay waxyaabo aan ka soo horjeedno. Waan ognahay warbixinnada magaalooyinka waaweyn. Waan ognahay sida xun xun. Qof ayaa ii sheegaya wanaaggaaga, dartiis Ilaah.
HER DHAMMAAN DHAQANKA SAXIIXA IYO SHARCIGA AAN LA-LAHA EE MONTREE ”
“Montreux wuu socdaa. Qof kasta oo aan taariikhyahan ahayn ama xeer-ilaaliye ayaa ku doodaya oo ku doodaya. Waxaan ka hadlaynaa iyaga shalay, Mr. Wasiir baa hadal soo saaray. 'Waxaan dhowaan ku dhufan doonnaa pickaxe'. Aaway fikirka 16 milyan oo qof? Tani waxay quseysaa kaliya 16 milyan oo qof, laakiin 82 milyan oo qof. Ixtiraamkaas, DSI, in kasta oo qoto dheer, farsamo, akhlaaqeed iyo dhaqan ay sabab u tahay warbixin caafimaad iyo 'siyaasadaha biyaha ee Istanbul marka loo eego kan' ayaa yiri, waan ku faraxsanahay, in kasta oo cadaadiska oo dhan. Marka laga tago taas. IMM ahaan, waxaan baarnaa xuquuqdeena sharciyeed. Tani waxay noqon doontaa sharraxaad. Sug Isniinta. Sharraxaadda farsamada ayaa sii socon doonta. Boqolaal asxaabteyda ah ayaa baaraya hawshan. Tani waa arin muhiim ah. Waxaan idhi xukunku markuu dhamaado warbixintii 130-bog oo cilmi baarista ah meelwalba. 15-16 saynisyahano ah, oo hoos yimaada warbixinta ay saxeexeen, 'Ya channel; ama Istanbul 'ayuu yidhi. Haddaba saynisyahanku ha difaacayo ha i tuso wuxuu difaacayo. ”
İMAMOĞLU: “Dhismooyin cusub ayaa dib looga sheekayn doonaa Shalay”
Wadada la maro ee TEM, wadada E-5, wadada buundada cusub ee la dhisay ama Wadada Waqooyiga Marmara ee la dhisay shalay, dhismayaasha cusub dib ayaa loo dhisi doonaa. Waxaan ahay qof farsamo. Waxaan ahay qof ku guuleystay shaqo keli kali badan isla markaana sameeyay mashruuc ka badan kuwii dhaha 'waan bilaabi doonaa, waan sameyn doonaa.' Si fiican ayaan u aqaan sida mashruuca, shaqo dhisme, warshadaha dhismaha ay halkaas ugu silcin doonaan. Waxaan ugu hadlayaa sida qof wax yaqaan. Marka, waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo kuwa naga dhigaaya inay u egyihiin 'Wax aan la rabin' ama wax: Waxaan leeyahay dabeecad difaacda mashruuc kasta oo caqli gal ah inta ay horreyso. Laakiin tani waa shaqo aad muhiim u ah oo dhibaato ku ah 'channel ama Istanbul'. Waxaan ku soo bandhigi doonnaa mowduuc walba mid mid horteeda dadka reer Istanbul oo lahadlay 3 sano laakiin aan aqoon laheyn. Sug; Waxaan haynaa aqoon isweydaarsiga usbuuca koowaad ee Janaayo. Ninkii wuu cararaa markaan iraahdo. 'Berrito waxaan garaaci doonnaa pickaxe' ayuu yidhi Mr. Waa maxay qodku? Waxaan ka shaqeeyey qodista; Waan ogahay garoonka tubaakada, Waan ogahay duurka midhaha. Hadday qodeyso, wuu garanayaa, way fududahay. Laakiin maahan sida qodista. Berito ugu yeeri maysid dozer. Kani waa Channel Istanbul. Taasi ma fududa. Berrito ayaan qodaynaa! ' Maxaad toogataa Tani ma gabal keega ah? 8 milyan oo reer Istanbul ah ayaa taga oo raadinaya xuquuqdooda. 16 milyan oo reer Istanbul ah. Waxaan sii wadaynaa inaanu digno. ”
IMAMOGLU: "WAA INAAN KU SAMEEYSAA WAAYAHA"
Su’aasha labaad ee la weydiiyay Imamoglu wuxuu ahaa, “Waxaa ku yaal qabriga magaalada Buyukada oo laga wada hadlay 2 maalmood oo la sheegay in loo furay 81 fardo. Adalar Governorate ayaa sidoo kale sameysay bayaan waana la xaqiijiyay. Xayawaanka jecel xayawaannada ayaa la sheegay inay fardo ku tahriibinayeen jasiiradaha. Ma leedahay daraasad ku saabsan mawduucaan? Imamoglu, su'aashan, "Shalay, sida ugu dhaqsaha badan markaan macluumaadkan u helo waxaan doonayey warbixin. Wali wax war ah kama helin. Marka tan la eego, runtii waxaan nahay heerka ugu sareeya ee raaciyaasha marka laga hadlayo ilaalinta nolosha iyo dabeecadda. Xakamaynta iyo kuwa aan qeexnayn waxay ku dhex noolaa Jasiiradaha sannado; laakiin gaadiid laakiin arrimo kale; 90 boqolkiiba waa la kala diri doonaa qeybtii hore ee sanadkan. Waxaan si dhakhso leh ugu dhaqmeynaa gaadhiga. Waxaan sidoo kale raacnaa nidaamka aad tiraahdid ”.
Ra'iisul Wasaare Erdogan: "Marmaray waa mashruuc caalami ah"
Channel ayaa ka gudbi doona Istanbul
Jaamacadda Munzur waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta